त्यस्तो गाउँ जहाँ बस्न गए पाइन्छ सित्तैंमा घर, १३ लाख रुपैयाँ अनि जागिर ! | Kendrabindu Nepal Online News
त्यस्तो गाउँ जहाँ बस्न गए पाइन्छ सित्तैंमा घर, १३ लाख रुपैयाँ अनि जागिर !
८ श्रावण २०७६, बुधबार १६:२७
एजेन्सी । इटलीको एक गाउँमा बस्न गए सित्तैंमा घर, १०,००० युरो अर्थात् १३ लाख रुपैयाँ अनि जागिर दिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर शर्त के छ भने त्यसरी बस्न जाने परिवारको एक बच्चा भने हुनैपर्छ । उनीहरूको यो प्रस्ताव खासगरी युवा परिवारको लागि हो । गाउँलेहरू चाहन्छन् कि मानिसहरू बाहिरबाट त्यहाँ आऊन् र उनीहरूको समुदायको हिस्सा बनून् ।
उत्तरी इटलीकोे पीडमन्ट क्षेत्रको लोकाना जिल्लाका थुप्रै गाउँ सुनसान भएका छन्, त्यहाँ बस्ने जनसंख्यामा ठूलो गिरावट आएको छ भने अलिअलि भएकाहरू पनि बूढा छन् । त्यसैकारण गाउँलेहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । शुरुमा यो योजना इटलीकै नागरिकहरूका लागि मात्र थियो, तर अहिले यो प्रस्ताव संसारभरकै मानिसहरूका लागि भएको बताइन्छ ।
यी गाउँहरू सन् ११८५ ताका बसाइएका थिए । यहाँका घर ढुंगा र काठबाट बनाइएका छन् । यहाँ एउटा हाइड्रो पावर प्लान्ट पनि छ, जहाँबाट उत्पादित बिजुली इटलीका राज्य एवं उद्योगहरूलाई बेचिन्छ ।
यहाँका मेयरका अनुसार यहाँ हरेक वर्ष ४० जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने १० जना शिशु जन्मने गरेका छन् । पूरै इटलीको तस्बिर लगभग यस्तै छ । युवाहरू जागिर एवं अवसरको खोजीमा शहर वा अर्को देशको शहरमा जान्छन् । फलस्वरूप सन् १९०० मा ७००० रहेको यहाँको जनसंख्या अहिले केवल १ हजार ५ सय मात्र भएको बताइएको छ ।
Prevवर्ल्डलिंकको नयाँ योजना: ‘अब हरेक टीभीमा यूट्यब’
द्वारीकलाल चौधरीको एक्शनः व्यक्तिको कब्जामा रहेका पोखरी फिर्ताNext